Maitiro Ekuchinjisa Yako Wordpress Saiti kuNew Domain | Martech Zone
Maitiro Ekuchinjisa Yako WordPress Siti kuNew Domain
Chipiri, Mbudzi 26, 2019 Chipiri, Mbudzi 26, 2019 Douglas Karr
Paunenge uchishandira yako saiti yeWordPress pane imwechete inomiririra uye uchida kuendesa kune imwe, haisi nyore sezvaungafunge. Chero chiitiko cheWordPress chine zvinhu zvina ... zvivakwa uye IP kero is hosted at, the MySQL Database iyo ine zvemukati zvako, izvo zvakaiswa mafaera, madingindira uye plugins, uye WordPress pacharo.
WordPress ine yekunze uye yekumisikidza michina, asi inongotenderwa kune chaiko zvirimo. Izvo hazvichengetedze munyori kuvimbika, uye hazvifambise zvaunogona kuita - zviri pamoyo pechinhu chero kuiswa. Yakareba nyaya ipfupi… zvinorwadza chaizvo!
Kushandisa BlogVault, Ini ndakaisa iyo plugin pane yangu sosi saiti, ndikawedzera yangu email kero yezaziso, uye ndokupinda yangu nyowani URL uye FTP zvitupa. Ini ndakadzvanya kutama… uye maminetsi mashoma gare gare ndakave neemail mubhokisi rangu rekunyora kuti saiti yakatamiswa.
Ini chaizvo ndaisafanirwa kuita chero chinhu ... dzese sarudzo, vashandisi, mafaera, nezvimwewo zvakanyatso kutamirwa kuenda kuseva nyowani! Kunze kwechigadzirwa chavo chinoshamisa chekutama, BlogVault ibasa rekuchengetedza rese iro rinopa zvimwe zvinhu:
Edzai Kudzorera - Iwe unoda kudzokera kumashure kune yapfuura vhezheni yako saiti? Asi unoziva sei kana chiri icho chaicho chakarurama? BlogVault inokutendera kuti utore iyo yakasarudzika vhezheni vhezheni kune chero avo eeserva bvunzo uye iwe unogona kuzviona zvichishanda sewebsite chaiyo.
Dzosera Auto - Hazvina mhosva kuti webhusaiti yako yakanganisa, kana kukanganisa kwevanhu kwakakonzera kukundikana, BlogVault ichagara iri padivi pako kuti ikusimudze netsoka dzako nekukurumidza. Iyo Yekudzosera-Dzosera ficha inongozvidzoreredza iyo yekuchengetedza kune server muawa yako yekushaiwa, pasina chikonzero chekupindira kwemanyore.
chibatiso - BlogVault inovimbisa 100% chengetedzo nekuchengetedza akawanda makopi ekuchengetedza kwako munzvimbo yakasununguka pawebhusaiti yako. Yako backup, iyo yakavharidzirwa, inochengetwa munzvimbo dzakachengeteka dhata uye zvakare kumaseva eAmazon S3. Kusiyana neyakajairika kushandiswa kweAmazon S3, ivo havachengete humbowo sechikamu chesaiti, nokudaro vachideredza chero hacks anogona
History - BlogVault inochengetedza nhoroondo yemazuva makumi matatu yezvakachengetedzwa kuitira kuti iwe ugone kudzokera kune chero wavo chero nguva panguva.
Backups - BlogVault inotora nzira yekuwedzera kune backup, kudzoreredza uye kutama maitiro. Zvisinei nekuti BlogVault iri kufamba, kutsigira, kana kudzorera saiti, ivo vanongoshanda chete nezvakachinja kubva pakuenderana kwekupedzisira. Izvi zvinoponesa nguva uye bandwidth.
Saina kumusoro kweBlogVault
Kuzivisa: Isu tiri mubatanidzwa we BlogVault.
Tags: blogvaultsei kutimaitiro ekuchinjisa wordpress kudomain nyowanisei ku WordPressfambisa WordPressfambisa wordpresschinja wordpressWordPress
Nyaya Dzidzo Yekushambadzira: Tinogona Kuvimbika?